M/weyne Shariif oo ku dhawaaqay in waddanka ay macaluuli ka dillaacaday. – Radio Daljir
M/weyne Shariif oo ku dhawaaqay in waddanka ay macaluuli ka dillaacaday.
Luulyo 19, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, July 19 – Madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Shariif Sh. Axmed ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay waddanka ka jirto macaluul ba’an kaddib markii abaaro xooggan ay dalka ka dhaceen.
M/weynaha Soomaaliya Shafiir Sh. Axmed ayaa hadalkaan jeediyey kaddib markii maanta uu kormeer gaaban ku tagay xeryaha ay deggan yihiin dadka ku barakacay abaaraha ba’an ee ka jira Soomaaliya gaar ahaanna koonfurta iyo gobollada dhexe.
M/weyne Shariif, ayaa tilmaamay xaaladdu hadda in ay tahay mid macaluuleed oo ay kumanaan qoys la tabaalaysan yihiin baad iyo biyo la’aan, ayna la il-daran yihiin nafaqo-darro, iyo xanuuno baahsan oo soo dugaashaday tabar-darrida haysata dadka taasoo sababtay dhimasho aad u tiro badan.
Md. Sh Shariif, waxaa uu dadka Soomaaliyeed u soo jeediyey in ay isku gargaaraan, iskana gacan qabtaan dhibaatooyinka waddanka ku habsaday gaar ahaan abaarta oo ah midda ugu weyn ee maanta Soomaaliya haraysay.
Dhinaca kale hay’adaha samafalka ee ku lugta leh Soomaaliya ayaa ka shawraya tallaabo ay suurtagal tahay in ay ku dhawaaqaan taasoo ah xaalad-macaluuleed oo Soomaaliya ka jirta.
Samafalayaasha, ayaa hadda rog-rogaya war-bixinno aad u tiro badan oo ay ka helayaan shaqaalahooda ku sugan gudaha Soomaaliya taasoo ay suurgal tahay in ay ku xambaarto ku dhawaaqidda xaalad macaluuleed oo Soomaaliya ka jirta.
Khaliif Ciise Mudan oo loo magacaabay wasiirka amniga ee Puntland.